Hurumende Yoendesa Mberi Musangano neveMabhizmisi weKuzeya Mutemo Wayo paMitengo
Musangano wange uchifanira kuitwa nemusi weChitatu pakati pehurumende nemasangano anomirira vemabhizimisi uchikokerwa nebazi rezvemari nesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers (CZR) unonzi wambosendekwa parutivi kusvika svondo rinouya.
Izvi zvaitwa kunyange hazvo zvinhu zvaita manyama amire nerongo munyaya dzezvehupfumi zvichitevera danho rakatorwa nehurumende rekudzika mutemo wechimbi chimbi kana kuti Presidential Powers (Temporary Measures) (Financial Laws Amendment) Regulations 127 of 2021.
Mutemo wakadzikwa mukupera kwesvondo rapera uyu unomanikidza vemabhizimisi kuti vatengese zvinhu nemutengo unoendererana newepamusika wemari weReserve Bank of Zimbabwe, RBZ, foreign exchange rate kwete pamukoto.
Pakangodzikwa mutemo uyu zvimwe zvinhu zvakabva zvawedzerwa mutengo uku vamwe vemabhizimisi vachiti havachadi kutambira madhora ekuAmerica kunyangwe hurumende iri kuti ngaashandiswe asi nemutengo wepamusika weRBZ kana kuti foreign exchange auction.
Mhute yaputira nyika panyaya dzezvehupfumi iyi yapa kuti padaidzirwe musangano wechimbi chimbi uyu.
Asi mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Retailers, VaDenford Mutashu, vati musangano wekuzeya mamiriro ezvinhu wasendekwa parutivi nekuti hurumende yati inoda nguva yekumboona kuti mutemo uyu uri kushanda sei.
Gavhuna weRBZ, Doctor John Mangudya, uye mutevedzeri wegurukota rezvemari, VaClemence Chidawu, vange vachitarisirwa kupinda mumusangano uyu.
Hatina kukwanisa kubata VaMangudya avo takatumirawo mibvunzo yavasati vapindura.
Asi mumashoko padandemutande reTwitter RBZ inoti danho nho iri harisi rekuda kuomesera vemabhizimisi asi kuti kuunza kugadzikana pamusika nekumisa huori kune vemakambani vanowana mari kubhanga guru renyika nemutengo uri pasi asi vodhurisa zvinhu.
Nyanzvi munyaya dzezvemabhanga, uye vari nhengo yeZanu PF, VaGilbert Muponda, vanotiwo mutemo uyu hauna kunyanya kuipa nekuti unodzikamisa dhora remunyika neku kuti vatengi vasaomeserwe sezvo vamwe vemabhizimisi vari kuwana mari kuRBZ vari kubatira vanhu.
Asi imwe nyanzvi munyaya dzezvehupfumi, VaVictor Bhoroma, vane maonero akasiyana vachiti havasi vose vari kuwana mari kuRBZ uye bhanga iri riri kutatarika kupa vanenge vanzi vapihwe mari dzacho nenguva.
Pasi pemutemo uyu, vanenge vawana mari pamusika wemari weRBZ voishandisa zvisizvo vanonzi vachabhadhairiswa miriyoni imwe chete yemadhora uye vemabhanga vanonzi vanoita zvehuori kupa makambani matsamba ekuti vawane mari pamusika weRBZ vanonzi vachabhadhariswa mamiriyoni mashanu sechirango.
Vemabhizimisi vanonzi vanoramba kutambira dhora remuZimbabwe vachabhadhariswa mari inosvika zviuru makumi mashanu kana kuti 50 000.